जव म:र्न लागेको मान्छेलाई (ओराङ्गुटान) बाँदरले तानेर बचायो ! - Aajako Nepali Khabar
Home चाखलाग्दो कुरा जव म:र्न लागेको मान्छेलाई (ओराङ्गुटान) बाँदरले तानेर बचायो !
जव म:र्न लागेको मान्छेलाई (ओराङ्गुटान) बाँदरले तानेर बचायो !
एजेन्सी बाँदरले तानेर बचायो – के जंगली जनावरहरुले पनि मानिसलाई सहयोग गर्छन् ? अवश्य गर्छन् तर यो हदसम्म कुरा बुझेर सहयोग गर्ने त्यस्ता जनावर कमै मात्र हुन्छन्। इन्डोनेसियामा एक व्यक्ति जब दलदलमा फँसे एउटा अपरिचित (ओराङ्गुटान) बाँदरले सहयोगका हात अगाडि बढायाे।
इन्डोनेसियाको बोर्नो क्षेत्रमा सर्प खोज्न पुगेका एक व्यक्ति एउटा खोलामा छिरेका थिए। तर त्यहाँ दलदल भएका कारण उनको कम्मरभन्दा तलको भाग गड्यो। धेरैबेरसम्म उनी बाहिर निस्किन सकेनन्।
उनलाई हेरिरहेको ओराङ्गुटान उनको नजिक पुग्यो। नजिक पुगेपछि उसले पक्कै पनि सहयोगको खाँचो परेको हुनसक्ने ठानेर हात अघि बढायो।
यस्तो दृष्य एक सौखिन फोटोग्राफरको क्यामेरामा कैद भयो। इन्डोनेसियामा वाइल्डलाईफ फोटोग्राफी गर्दै गरेका अनिल प्रभाकर बोर्नो संरक्षित क्षेत्रमा साथीहरुसँग घुम्दै गर्दा उनले सर्प खोज्न पुगेका व्यक्ति दलदलमा फसेको देखे।
फोटोग्राफरले त्यो दृष्य देखेर नजिक बढ्दै गर्दा ओराङ्गुटान पनि ती व्यक्तिसामु आईपुग्यो र हात दियो।फसेका व्यक्तिले भने ओराङ्गुटानलाई हात दिएनन्, सहयोग लिएनन्। केहीबेरको प्रयासपछि उनी आफै बाहिर निस्किन सफल भए।
उनले किन ओराङ्गुटानलाई हात नदिएको भन्ने प्रश्नमा आफूले अपरिचित जनावरको हात समाउन डर लागेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।प्रभाकरका अनुसार त्यसरी सर्प खोज्न गएका व्यक्ति त्यस संरक्षित क्षेत्रमा रहेका लोपोन्मुख जनावरहरुका लागि काम गर्ने एउटा फाउण्डेशनका सदस्य थिए।
उनले ओराङ्गुटान जस्तै केही जनावरहरुको सुरक्षाका लागि त्यहाँ रहेका विषालु सर्पहरु खोजेर निकाल्ने काम गर्ने गरेका थिए।प्रभाकरका अनुसार त्यसअघि कुनै व्यक्तिले ओराङ्गुटान बसेको नजिकबाट एउटा सर्प खोलामा झरेको कुरा ती फाउण्डेशनका सदस्यलाई भनिदिएका थिए।
उनी त्यो सर्पले ओराङ्गुटानलाई नडसोस् भनेर त्यहाँबाट निकाल्न खोलामा छिरेका थिए। ओराङ्गुटान विश्वकै लोपोन्मुख प्रजातिको बाँदर हो।